AMBODIN’ISOTRY : Vola roa alina ariary saika namonoana Karàna roa
Olana ara- bola ! Saika novonoin’ny olona ny teratany karàna roa teny ambodin’Isotry, omaly. Voalaza ho nangalatra vola roa alina ariary mahery ny mpiasan’izy ireo ary voakasi- tanana. Tezitra ireo mponina teo amin’ny manodidina ka efa nivonona ny hikasi- tanana ireto karàna.
« tokony ho tamin’ny 9 ora mahery no nitrangan’ny olana. Tovolahy iray mpiasa tao amin’ny trano fivarotana ambongadina ana teratany karàna no nivoaka vay ao ary nisy faritra nivonto ny vatany. Araka ny nolazainy dia novonoin’ireo mpapiasa azy izy noho ny fahaverezana vola roa alina ariary mahery tao amin’ny tranom- barotra », hoy i Roger Emmanuel, tompon’andraikitra iray teo anivon’ny fokotany.
Poa toy izany dia nitangorona teo anoloan’ilay tranom-barotra ireo mponina teo amin’ny manodidina. An- jatony izy ireoary efa nivonona ny hanao valifaty amin’ieo karàna roa tao amin’ilay tranom- barotra. Nalaky tonga anefa ny tompon’andraikitra teo anivon’ny fokotany ka nentina avy hatrany teny amin’ny biraom- pokotany izy ireo niaraka tamin’ilay mpiasa.
« Manodidina ny ora iray no faharetan’ny fifampiresahana tao main’ny biraom- pokotany. Ireo mponina tamin’io fotoana io efa nitangorona manodidina ny birao indray. Tsy nanaiky mihitsyizy ireo raha tsy avoaka ireo karànaroa .Ilay mpiasa mihitsy no nivoaka nilaza tamin’ireo olona fa efa nifandamina ny roa tonta izay vao niala tsikelikely ireo mponina », hoy ny mponina iray teny an- toerana.